13 inogara Embraer Legacy 650 Ndege Aviation Interior Review Private Jet Air Charter Flight Service zvebhizimisi kana munhu ndege Rental Company pedyo neni nokuda kwenyu inotevera kufamba kuenda pamusoro mid-saizi deadhead mutyairi wendege chinhu gumbo akatorwa munharaunda yenyu.
Kana totaura bumbiro jets hapana kuperevedza zvokusarudza. Imwe sarudzo dzakakurumbira ndiye Embraer Legacy 650 kwendege. This Embraer Legacy 650 kwendege muchidimbu achaputsa pasi zvikonzero nei vatungamiriri uye vamwe vanotora bumbiro Flights zhinji saka kusarudza zvikuru ndege iyi kwavo voga ndege.
The Embraer Nhaka 650 ndiye ndiye muumbozha uye manyorerwo. It ane nhatu takaparadzana cabins uye nenzvimbo kusvikira 14 vakatakurwa. jeti Izvi zvikuru kabhini nzvimbo womukirasi kwayo uye uyewo anouya aine credenza, zvakazara hodhiropu, uye 134 cubic rutsoka lavatory (uyewo kupfuura mukirasi yacho).
The Embraer Nhaka 650 ane wakarebesa garandi ari indasitiri pa 10 makore kana 10,000 ndege maawa. Mukuwedzera, chekambani mutengi rutsigiro chikwata rinoshanda 24/7, uye varipo pamusoro 70 basa nzvimbo pasi pose kuti vakazvitsaurira kuna iwe jeti. Ndokusaka Embraer yave rakava #1 munguva mutengi rutsigiro nguva uye nenguva zvakare, uye ichi Ndokusaka pane pari pamusoro 1,200 pamusoro jets izvi mubasa ane yaisanganisa 26 miriyoni zvemakiromita yakadzikiswa.
Low Operating mari
Embraer Legacy 650 Aerospace private ndege bumbiro Flights zvimwe yakadereresa anodawo mari munyika. Izvi mukuru Utilisation ndege anoshandisa huni vakarongeka injini uye ndege Magadzirirwo here ane Nokuraramisa mari dziri ndima neavo vakawanda maviri-kabhini ndege. With zvakawanda 3,900 nautical makiromita (pamwe vanhu vana) uye payload kukwanisa kusvika 5,000 nepondo zviri nyore kuona kuti nei vatungamiriri vakawanda saka vanosarudza jeti ichi chete.
Kana uchida akavimbika uye rakapamhamha ndege zvinoita kuti vanhu vanonzwa anokosha uye dzinovabvumira kushanda zvakanaka ipapo Embraer Legacy 650 ndiyo imwe pfungwa yakasimba. Chine umbozha, Kuvimbika uye vakaderera anodawo mari kupa vanoshandisa pamwe jeti anoshanda zvikuru kana uri kurishandisa zvebhizimisi kana chokunakidzwa.
EMBRAER Jet Legacy 650 Interest pamusoro nguva:
EMBRAER Airplane Legacy 650 Interest ne subregion
Instagram: EMBRAER 750 nhaka 650 Kwendege Interior
Embraer Legacy 650 Ndege Aviation Luxury Interior Private Jet Charter Flight Service #emptyleg #Jetcharter #emptylegs #wysluxury #Embraer # EmbraerLEGACY650Jetairliner # EmbraerLegacy650 # EmbraerLegacy650seating # EmbraerindustrieLegacy650 #Legacy 650Embraer #Luxuries #lifestyle #traveler
A mumhanyi vakagoverana ne WysLuxury JetCharter (@wysluxury) pamusoro Dec 10, 2017 pa 6:53pm PST